Midowga Yurub oo ka Fiirsanaya Laba Dariiq oo ay Taageeradooda Dhaqaale u soo mariyaan Somaliland iyo Qorshahooda Dib-u-dhac ku yimaadda Doorashooyinka | Somaliland Post
Home News Midowga Yurub oo ka Fiirsanaya Laba Dariiq oo ay Taageeradooda Dhaqaale u...
Midowga Yurub oo ka Fiirsanaya Laba Dariiq oo ay Taageeradooda Dhaqaale u soo mariyaan Somaliland iyo Qorshahooda Dib-u-dhac ku yimaadda Doorashooyinka
Hargeysa (SLpost)- Midowga Yurub oo Somaliland ka taageera dhaqaalaha lagu bixiyo dhinaca horumarinta adeegyada bulshada iyo dhiirrigelinta nidaamka dimuqraadiyadda, ayaa shaaca ka qaaday inay ka fiirsanayaan sidii ay taageeradooda dhaqaale toos ugu siin lahaayeen Xukuumadda.
Waddamo badan oo ka tirsan Midowga Yurub, ayaa dhaqaalaha ay ku caawiyaan Somaliland u soo mariya Sanduuqa horumarinta Somaliland, waxaanay midowga Yurub hore u sheegeen inay ka qayb-qaadan doonaan isla markaana ay taageeradooda soo marin doonaan Sanduuqaas, haseyeeshee waxa ay sheegeen inay wakhtigan ka fiirsanayaan sidii ay arrintaas uga fiirsan lahaayeen iyaga oo meesha ku soo daray Baanka Adduunka inay soo mariyaan taageeradooda dhaqaale.
Safiirka Midowga Yurub u qaabilsan Somaliland iyo Soomaaliya Michele Cervone d’Urso oo Waraysi Gaar ah siiyey Wargeyska Himilo, ayaa sidoo kale ka hadlay mowqifkooda ku aaddan haddii dib-u-dhac ku yimaaddo Doorashooyinka Somaliland ee la filayo badhtamaha sannadkan inay ka dhacaan.
Safiirka oo la weydiiyey Su’aal nuxurkeedu u dhignaa, Xilliga ay midowga Yurub bilaabi doonaan inay taageeradooda ku soo shubaan Sanduuqa horumarinta Somaliland iyo xaddiga uu le’eg yahay dhaqaalaha ay ugu talo-galeen, waxa uu ku jawaabay, “Midowga Yurub wakhtigan waxay ku hawlan yihiin baadhitaanka dariiqyadii ay taageeradooda ugu soo biirin lahaayeen sanduuqa horumarinta Somaliland. Si kasta, waxaan sidoo kale isku deyeynaa inaan taageeradayada baahiyaadka Somaliland u soo marino sanduuqa Baanka Aduunka. Labada xalba wakhtigan waanu ka tashanaynaa,” Sidaas ayuu yidhi Safiirka Midowga Yurub.
Michele Cervone d’Urso oo la weydiiyey sida ay arkaan haddii doorashooyinku wakhtigooda dib uga dhacaan, waxa uu ku jawaabay, “Sababta taageerada Midowga Yurub ee Somaliland waa baahida horumarka oo muhiim ah, waxaana naga go’an inaan la dagaalano gaajada meel kasta adduunka. Laakiin, waa dhab in la dagaalanka gaajadu aanay soconayn hadaanu jirin maamul-wanaag,” ayuu yidhi, waxaanu intaas ku daray, “Nidaamka dimoqraadigu waa wadiiqo lagu gaadho maamul-wanaaga, dhiirigelinteeduna waa muhiimada Midowga Yurub. Waxaan qeyb ka nahay guddiga isku-duba-ridka oo ku jiraan Denmark, Midowga Yurub, Norway, Sweden, Switzerland, Ingiriiska iyo Maraykanka, oo kormeera, isla markaana taageera nidaamka dimoqraadiyada Somaliland. Waxaan ka caawinaa komiishanka doorashooyinka qorshahooda hirgelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha ee June 2015, una soo jeedinaynaa dhamaan dhinacyada Somaliland inay socdaan jihadaa, oo ku qotonta balanqaadkii xukuumadda.
Waxaan ogahay in bulshada Somaliland taa sugayaan, beesha caalamkuna waa inay xushmeeyaan, isla markaana tagaeeraan doonista shacabka,” Sidaas ayuu yidhi Danjire Cervone d’Urso.